စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နှင့် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ပုလဲမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်နဲ့ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း တချို့က ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဒီကနေ့ ညနေမှာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ 2012-09-12
၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်က လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရန် ဒေသခံ ကျေးရွာလူထု တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေကြစဉ်။
၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ ပါဝင်တဲ့ မုံရွာဦးအောင်ရှင်က ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းချက်တွေကို အခုလို ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်နဲ့ RFA အဖွဲ့သူ ဒေါ်ခင်ခင်အိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် အပြည့်အစုံကို နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကြေးနီစီမံကိန်း ဆန့်ကျင်ရေး ၀ိညာဉ် ကြွေးကြော်သံ လှုပ်ရှားမှု
လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေကို ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတရားစွဲ
ကြေးနီစီမံကိန်း ပြဿနာ ဖြေရှင်းပေးရန် သမဂ္ဂအဖွဲ့များ သမ္မတထံ တောင်းဆို
စိုက်ခင်းပေါ် ကြေးနီကုမ္ပဏီ မြေစာဆက်ပုံနေ Eleven Media Group ကချင်ပြည်နယ် စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အတွက် ငွေလှူဒါန်း
တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် တွန်းပို့ လောကထဲရောက်မှန်းမသိရောက်ကုန်ရင် နောက်ပြန်မလှည့်
Sep 14, 2012 09:23 PM
Please take action more and more for this case.
The land are our public owned land and they are producing bullet in China from that copper product.
Our people already asked for the permission right according to law.
Please take care our activists and all or public.
They can make unnecessary arrangement, so must circulate the letters to those villages including Nyaung Bi Gyi ship
crossing area and near Monywa area.
That demonstration is essential and protecting other Burma's land also.
Those SPDC and USDA are preparing to make trouble for their future plans.
Sep 12, 2012 07:53 PM